पृथ्वी जयन्ती मनाउन एमाले बरिष्ठ नेता खनाल पनि ! – YesKathmandu.com
काठमाडौ २७ पुस । लोकतान्त्रिक सरकारले मनाउन छाडेको राष्ट्रिय एकता दिवस तथा २९४ औ पृथ्वी जयन्ती सरकारकै मातहतको एक कार्यालयले भने धुमधामसंग मनाएको छ ।
सरकारकै संरक्षणमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आज विहान विशेष कार्यक्रम गदै पृथ्वी जयन्ती मनाएको हो । प्रतिष्ठानले मनाएको पृथ्वी जयन्ती मनाउन नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सक्रिय भएका थिए । विहान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनाल प्रमुख अतिथि भएर र्यालीको उद्घाटन समेत गरेका थिए ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुस २७ मा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय खारेज गरेपछि यसरी सरकारकै पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल नै दिवस मनाउन आफै प्रतिष्ठान पुग्नु अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
बग्गीमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक राखेर प्रतिष्ठानले र्याली सहित रत्पपार्क सहिदगेट हुदै सिंहदरवारस्थित सालिकमा गई माल्यापर्ण गरेको थियो । खनालले घुमाउनका लागि बग्गीमा राखिएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर सहितको र्यालीलाई उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा एमालेका पुराना नेता मोदनाथ प्रश्रित प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा उप्रेती लगायत लेखक साहित्यकारहरुको सहभागि रहेको थियो । सेनाको बग्गीमा पृथ्वीको तस्विर राखि बाजा सहित र्याली निकालिएको थियो । प्रतिष्ठानले राजतन्त्रको अन्त्यपछि पहिलो पटक पृथ्वी जयन्ती मनाएको थियो ।
सरकारले पनि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर पृथ्वी जयन्ती मनाउने तयारी गरेको थियो । तर आलोचित बन्ने डरले सरकारले निर्णय गर्न सकेका थिएन । सरकारका अहिलेका मन्त्रीहरु कमल थापा,सिपी मैनाली बिजयकुमार गच्छेदार पृथ्वीजयन्ती मनाउन पक्षमा रहेका थिए । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पृथ्वीजयन्ती मनाउन मनसाय राखेका थिए ।
सीके रावतलाई किन प्रहरी ‘हिरो’ बनाउँदैछ ?
मन्त्री र सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने मधेसी मोर्चाको निर्णय